Ma 18-ka May Ayaad Diiddan tahay? Mise Isir Iyo Reer Baad Diiddan tahay? Faallo iyo falanqayn ku saabsan doodaha naf la caarriga ah ee duraya 18-ka May. Waxa Qoray-Maxamed Aadan Tarabbi | Maalmahanews
Ma 18-ka May Ayaad Diiddan tahay? Mise Isir Iyo Reer Baad Diiddan tahay? Faallo iyo falanqayn ku saabsan doodaha naf la caarriga ah ee duraya 18-ka May. Waxa Qoray-Maxamed Aadan Tarabbi
Ma 18-ka May ayaad diiddan tahay? Mise Isir Iyo Reer Baad diiddan tahay?
Waa laba aragtiyood oo aan isku mid ahayn, doodda odhanaysa 18-ka May looma dhamma waxaa ka muuqda fikir ku salaysan Isir iyo hayb. Dad ka dooddan qaba waxay ku doodayaan inay midnnimo iyo wadajir raadinayaan. Waxaase iswaydiin leh maxaa wadajir ka iyo midnnimada ummadda looga raadiyey 18-ka May?.
Dad ka reer Soomaalilaan waxay leeyihiin maalmo badan iyo taariikh fac wayn oo ka dhaxaysa waxaana ugu mudan 26-June, iyo 18-May. Labaduba waxay astaan u yihiin calan iyo dawladnnimo labada maalmoodna waxa saamayn badan oo tisqaadday 18-ka may. Haddii 1961-kii inqilaab kii uu hoggaaminayey Xasan Cabdille Walanwal (Xasan Kayd) uu ahaa inay soo celiyaan riyadii iyo rajadii reer woqooyiga, miyaan la odhan karin wuxuu ahaa dareen ku gaar ahaa dad gaar ah. Haddayse dhici lahayd tii ay rabeen maxay noqon lahayd taariikhda halkaas ku jirta?
Laga soo bilaabo 1960-kii markii aynu tagnay Muqdisho muu jirin dareen siyaasi ah oo ka dhaxeeyey dadkii ku noolaa Soomaalilaan. Dad kala aragti ah oo kala isir ah, isla markaana aan lahayn ujeeddooyin midaynaya ayaa tagay Muqdisho, waana sababta ay ugu yeelan waayeen saamayn siyaasi ah.
Haddii doodiinnu tahay SNM Isaaq bay ahayd sidaa awgeed nama khusayso wixii ku salaysan fikir kaas, miyaan la odhan karin, wixii aynu ku heshiinnay ayaa ahaa Soomaalilaan dad ka idinla heshiiyey ee nabadda ku baaqay isla markaana gogosha dhigay ayaa ahaa SNM. Miyaanay habboonayn in maalintaas la diido oo aan loo iman meelay joogaanba. Haddiise loo yimi oo nabaddii iyo wadajir kii ummadda la qaatay maxaa 25-sanno kadib keenay dooddan 18-May. Haddiise maalintaas la diidi lahaa baaqii SNM ee Burco maxaa dhici lahaa?
Dalwaynaha Maraykan ka laba maalmood ayaa laga xusaa maalin waa maalinta dad ka madow ay heleen xuquuda ah inay codeeyaan isla markaana ay ka baxaan adoonnimada. Maaliinna waa maalintii uu Ingiriisku ka baxay ee 4-7-1776-kii bal ka warran hadday yidhaahdaan dadka madow ee Maraykanka ahi nama khusayso maalinta xorriyaddu waayo looma dhammayn, oo waxaa xorriyadda qaatay oo kaliya dad ka caddaan ka ah?.
Bal ka warran haddii aad ka mid noqoto ciyaaryannada kubbadda cagta ee Barcelona oo taariikh iyo halbeeg ba leh, oo aad tidhaahdid aniga ima khusayso xuska iyo taariikhda naadigu, maxaa yeelay waan ka maqnaa. Dunida oo dhan ayey ka jirtaa afkaar siyaasiya iyo kala duwaansho dhaqaale iyo deegaan ba leh balse ta Soomaalidu waa ta ugu liidata ee aqoonyahankeedu uu ku cabbbirayo hab isir ku salaysan. 1981-kii illaa 1991-kii nin ka aad la dagaalamaysay ee xabbadda iyo waran ku idin ka dhaxeeyey ee 18-ka May kula heshiiyey ma istaahilaa inaad tidhaahdo looma dhammayn.
Burbur kii iyo xasuuqii gaar ka loogu gaystay qayb ka mida bulshada Soomaalilaan oo ay u gaysatay dadwlad aynu ka wada mid ahayn laakiin siyaasiyan adiga ku taageeraysay, ee lahaa barokac, bililiqo, kufsi, iyo xasuuq wadareed nin ka iska illaaway ee aan kaa aarsan, maataadana nabad iyo walaanimo kula nool, ma gayaa inaad tidhaahdid waxba ku ma gaadhin 18-Mayna ismaynaan cafin. Muran ka maalintani wuxuu dib inoogu celin karaa xasuus hore iyo utuno aynu siisannay 18-May.
Sidaynu ku wada leenahay oo ay inooga dhaxaysaa 18-May? Haddii shirkii Burco ee loo dhammaa 1991-kii aynu ku heshiinnay oo uu ahaa shirka kaliya ee dhulka Soomaalida ka dhacay taariikhda inta la ogyahay ee dad islaayey oo cadow isku ah oo kii qoriga sitay nabad iyo walaalnnimo ku baaqay gogoshana isagu dhigay, madashuna ay ahayd mid loo dhammaa oo aynu fulinnay go’aamadii ka soo baxay shirkaas. Miyaanu ahayn waxaynu wada leenahay oo kaliya aynu is dheersanahay hawshii iyo martiqaad kii aad idinku garanwaydeen. Haddiise aad i leedahay shirkii Burco waan tagay wixii ka soo baxayna waan ka baxay waa wax kale iyo dood kale. Dad ka qaar ayaa ba dafirsan oo ina leh ka ka maanaan qayb ahayn shir kii Burco.
Dad ka Soomaalilaan inay mid ahaadaan oo wax wadayeeshaan waxaa ka horreeya in la ilaaliyo oo la xoojiyo wixii ay haystaan ee taariikhdu ka mid tahay, ka mid ahow ama ha ka mid ahaan.
Taariikhda inta la ogyahay waligeed may dhicin 18-May ka hor shir ay isugu yimaaddaan beelaha Soomaaliaan miyaanay ahayn taariikh kale oo u baahan in la mahadiyo? Inankase waxa ku bartay ee ku barbaaray ee ku guursaday kuna caqliyeystay ka dib 18-kii May ee maanta leh dib ha loo eego muxuu kaga duwanaan lahaa wiil ka Baakaraha Muqdisho jooga ee arxan iyo naxariis intaba waayey?!
Wuxuu yidhi nin kii jiray Isaxaaqa maan diine xaaqa danbe ayaan diiday, wax ha walada yeesho maan diine ummaddii qayb ka mid ah xaqir oo tacab kii, halgan kii iyo nabadayntii ay ka soo shaqeeyeen ee aan cidina ka caawin ee summaddaa 18-May ku badbaaday inaad tidhaado waa bar ku ma taal, na ma qabato. Haddii aanad ku jirin dad kii ka soo horjeeday Kacaan kii iyo jabhaddii SNM, balse aad ku jirtay dad kii ka qayb galay shirkii Burco 1991-kii miyaanay ahayn biyo meel gudan ayey ku gororaan.
Halka aynu isugu nimi waa 18-May. Waxaan ku soo ururinayaa aynu oggolaanno taariikhdii Daraawiishta, isla markaana aynu qorno oo muunayno taariikhdii ADAL wixii laga hayo iyo Maxamuud Cali Shire iyo Cawo Dhurato. Gabooye iyo Tumaal taariikhdooda ayaa u baahan in iskuullada lagu dhigto oo la lafo guro. Wax badan ayeynu wada leenahay. Hankeennu ha dhaafo taariikh laga dhex urinayo reero aan kuwiinna ahayn.
Guddoomiyaha Gobollada Dhexe Ee Maraykanka Xisbiga Waddani